पढ्ने समय: 12 मिनेट
हामीले हालै एक ब्लग लेखे एक रेल मा बच्चाहरु संग चढेर र तपाईं मनोरंजन आफ्नो साना राख्नको लागि केही सुझावहरु दिनुभयो. किताब पढ्दै, युनो खेल्दै, र अडियोबुक सुन्नु पक्कै पनि कोहीको लागि आवश्यक छ, तर त्यहाँ यात्रा गर्नु अघि डाउनलोड गर्न धेरै अनुप्रयोगहरू छन् जुन हामी विश्वास गर्दछौं कि केवल तपाईंको मनोरन्जन मात्र गर्दैन तर तपाईंलाई बनाउन सहयोग गर्दछ तपाईंको यात्रा थप व्यवस्थित र मजा! गुगल प्ले गर्न App Store बाट, हामी सबै भन्दा राम्रो केही गोल गर्नुभएको 23 अनुप्रयोगहरू तपाईं यात्रा अघि डाउनलोड गर्न आवश्यकता. तपाईं आवश्यक सबै स्मार्टफोन छ र कहिलेकाँही आफ्नो अर्को यात्रा अघि.
यो शहरमा कानुनी हो कि तपाईं भ्रमण वा हुनुहुन्न, Airbnb एक घरेलू नाम हो. यो निश्चित तपाईं यात्रा अघि डाउनलोड गर्न आवश्यक अनुप्रयोग को छ. अनुप्रयोगलाई प्रस्ताव टाढा सस्ता मूल्यहरु, र प्रयोगकर्ता अनुमति दिएर थप प्रामाणिक अनुभव एक स्थानीय संग रहन, वा आफ्नो घर मा. अनुप्रयोगलाई पनि प्रदान गर्दछ सुविधा भनिन्छ यात्राहरू, जो आफ्नो रहन समयमा छनौट गर्न अनुभवहरू प्रदान गर्दछ. सम्म यो तपाईं एउटा गो आवश्यक सबै प्रदान गर्दछ हामी यसलाई लामो छैन पक्का, तर अहिले, उनीहरूले प्रदान गर्ने विकल्पहरू डाउनलोड गर्न निश्चित छन्.
तपाईं युरोप भर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं आफ्नो बाटो बनाउन गरिने राम्रो मौका छ रेल बाट. सार्वजनिक यातायात आफ्नो क्रस-देश लिंक को लागि युरोप मा विकल्पहरू प्रख्यात छन्, र गर्दा उडानहरू छिटो हो, रेलका थप सुविधाजनक छन्, धेरै जसाे, र सेवा धेरै मार्गहरू. घटनाको तपाईं रेल टिकट को आवश्यकता मा हुनुहुन्छ भनेर, डाउनलोड एक ट्रेन सेव अनुप्रयोग खरिद सस्तो बनाउन र सजिलो गर्न.
साथीहरूसँग यात्रा? ठूलो! तपाईंले सही तपाईंको यात्रा धन विभाजित छैन भने कुरा अप्ठ्यारो प्राप्त गर्न को लागि सजिलो तरिका छ. मतभेदबाट बच्नुहोस् र साथीहरू बीचको खर्च सजिलै विभाजित गर्न तपाईंको सेल फोन प्रयोग गर्नुहोस्. तपाईं एक समूह छ भने, यो यात्रा अघि तपाईं डाउनलोड गर्न आवश्यक अनुप्रयोगहरू मध्ये एक छ. Splittr यात्रा गर्दै मानिसहरूलाई लागि विशेष छ. जाँदा खर्च प्रविष्ट, के भुक्तानी र अनुप्रयोग बाँकी के गर्ने सहित.
तपाईं एक स्नायु यात्री हुनुहुन्छ भने, यात्रा गर्नु अघि तपाईंले डाउनलोड गर्नु पर्ने एउटा अनुप्रयोग शान्त हो, यो एक अनुप्रयोग हो जुन तपाइँको सबै भन्दा राम्रो मित्र हुनेछ. यस ह्यान्डी यात्रा उपकरण फिक्री लागि विभिन्न ध्यान भार छ, आत्म-सुखदायक, सास, र अधिक. यो पनि ध्वनि सुखदायक प्रस्ताव तिमी आराम गर्न मद्दत गर्न. म तनावग्रस्त बाहिर यात्रीको रूपमा, शान्त मलाई राख्न मद्दत गर्छ मेरो, राम्रो, calm on the road.
एक पत्रिका मा लेखन पुरानो स्कूल उत्कृष्ट छ. तर कागज मा केहि तपाईं यसलाई गुमाउने जोखिम चलाउन मतलब, विशेष गरी तपाईं धेरै देशहरूमा गएर गर्दा. यात्रा गर्नु अघि डाउनलोड गर्न अनुप्रयोगहरूको अर्को एक livetrekker.com हो. जर्नल तपाईंको तपाईं एक अन्तरक्रियात्मक नक्सामा आफ्नो यात्राको मा हेर्न सक्छन् त्यसैले फिर्ता यात्रा. तपाईं जाने रूपमा अनुप्रयोग तपाईं ट्रकहरु, तपाईंलाई सही मार्गमा नक्सा साथ रातो रेखा अंकन; अनुप्रयोगलाई पनि आफ्नो गति र उचाईमा निगरानी, यो साहसिक यात्री लागि ठूलो बनाउने. चित्र, भिडियो, अडियो, र पाठमा पाठ, एक मल्टिमिडिया यात्रा डायरी सिर्जना तपाईं साझेदारी गर्न सक्नुहुन्छ! मुक्त, iOS र एन्ड्रोइड, livetrekker.com
TripIt एक यात्रा ट्र्याकिंग अनुप्रयोग हो कि संगठित मद्दत गर्दछ तपाइँको सबै यात्रा जानकारी एकै ठाउँमा. होटल आरक्षण गर्न उडान बुकिङ देखि, TripIt एक यात्रा-गर्न-सजिलो पढ्न मा सबै केहि आयोजन ट्रयाक मा तपाईं राख्छ कि. या त आफ्नो खाता अनुप्रयोग सीधा लिङ्क, वा तपाईंको सबै पुष्टिकरण ईमेलहरू फर्वार्ड गर्नुहोस्, र TripIt बाँकी गर्नेछ. डेस्कटप उपलब्ध, एन्ड्रोइड, वा एप्पल आईफोन, you’ll be able to use it anywhere in the world.
तपाईं पहिले नै यो अनुप्रयोगले तपाईँको फोनमा छैन भने, यसलाई प्राप्त. जबकि उत्तरी अमेरिका हदसम्म डाटा आधारित मोबाइल अनुप्रयोग छुटेका छ, WhatsApp सन्देश लागि प्रयोग विश्वव्यापी छ, भिडियो कलहरू, र भ्वाइस कलहरू. यसको लोकप्रियता भन्दा कारोबार विदेशी गर्न वा एक मानक फोन नम्बर को lieu मा बाहेक एक WhatsApp नम्बर सञ्चालन त्यस्तो छ. Trust us when we say you’ll need to download WhatsApp.
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ? यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fapps-download-traveling%2F%3Flang%3Dne- (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल)
युरोप शीर्ष शानदार गाडिहरु
ट्रेन यात्रा स्कटल्याण्ड, यात्रा युरोप